Ị nwere ike ịnwụ kpamkpam ahia FX? Mgbe eziokwu na-ata ma na-afụ ụfụ ... | FXCC Blog
Ị nwere ike ịnwụ kpamkpam ahia FX? Mgbe eziokwu mebiri ma na-ewute ...
Nov 12 • N'etiti ahịrị, Isiokwu ndị na-apụta • 9321 Echiche • Comments Off na Ị nwere ike ịnwụ kpamkpam n'ahịa FX? Mgbe eziokwu mebiri ma na-ewute ...
E nwere ọtụtụ ihe mere anyị ji abawanye ahịa ahịa na enwere ụfọdụ njigide, nke na-agba ọsọ site n'usoro mkpebi anyị na-emecha mee ka anyị banye n'ahịa dịka ihe onwunwe ma ọ bụ ihe ntụrụndụ. Ikekwe otu ihe kachasị mkpa anyị ga-esi banye ahịa ahịa na-eme ka anyị nwe onwe anyị ma mesịa bụrụ ndị bara ọgaranya, ka anyị mee ihe n'eziokwu, anyị niile na-etinye uche n'echiche anyị banyere akụnụba na ọ dịghị ihe ọjọọ na ọchịchọ ahụ ...
Ole na ole n'ime anyị na-enweta mgbanwe zuru oke site n'aka; ịchọta ụlọ ọrụ, ịzụ ahịa oge (mgbe ị na-ejide ọrụ zuru oke) iji mesịa malite ịzụ ahịa dịka ọrụ isi oge anyị. Dịka anyị mesiri ọtụtụ ugboro ike, ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị na-agbaso otu ụzọ ahụ anyị si enweta ihe ọmụma nke azụ ahịa; anyị niile na-agbaso ụzọ nke ọ bụla iji nwee ihe ịga nke ọma dịka ihe pụrụ iche nye anyị dị ka àgwà anyị na àgwà anyị.
Otu n'ime ajụjụ mbụ anyị na-ebuli mgbe anyị chọpụtara na ịzụ ahịa maka oge mbụ bụ; "Ànyị nwere ike ibi ndụ na nkwụsị ahịa nke ahịa?" Mgbe e kwuchara, ọ dị ntakịrị ihe ị ga-abanye n'ime ụlọ ọrụ ahụ iji nwee ike ịghọ oge zuru ezu ọ gwụla ma a jụrụ ajụjụ ahụ. Ego ole anyị ga - achọ, iji zụọ ahịa n'enweghị ihe ọ bụla na - akwụ ụgwọ n'aka ọrụ, nwere ike iche dị iche iche na ebe ị na - azụ ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, anyị maara otu onye ahịa dị oke ụzụ na Cairo nke na-azụ ahịa akaụntụ $ 5,000 ma na-ele anya ime ihe dị ka $ 500 kwa ọnwa, nke (dika ya) na-enye ụgwọ ọrụ ndụ n'Ijipt. Ọ bụghị 'ụgwọ' dị mma, ma maka ya, dịka onye na-eto eto na-enweghị obere ọhụụ, ọ na-enye ihe ọ na-ekwu "ọrụ ndụ iji nyere aka ma ya na ndị ezinụlọ ya". Nke a bụ otu oge n'Ijipt mgbe mba ahụ na-enwe nnukwu ọgba aghara ma gbanwee na enweghi ọrụ na-edekọ elu maka ndị nọ n'okpuru afọ 30, enweghị ọrụ n'enweghị ọrụ ọ bụla dị oke. Ọ bụ ugbu a (n'enweghị ikike) karịa ọkwa dị na mba Europe dịka Ịtali, Spain na Gris, Egypt nọ na 70% maka enweghị ọrụ na-eto eto. Ya mere, nwoke anyị nọ na Cairo "na-atụle ngọzi ya" ịchọta 'ụtụ isi' n'efu, na ọ nwere ike ịzụlite site na okomoko nke ezigbo ịntanetị na laptọọpụ (nke a hụrụ ụbọchị dị mma).
Ya mere, nke a bụ otu ihe atụ zuru oke ma dị ezigbo njọ nke onye na-akwụ ụgwọ ahịa nke ahịa FX, n'ọtụtụ ụzọ, ọ naghị enwe ihe ọzọ ma ọ bụ siri ike ma ọ na-achịkwa ime ya n'okpuru nrụgide nke ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ebe ọdịda anyanwụ enweghị na-ata ahụhụ. Ma ndụ ya na-azụ ahịa FX (ntụgharị n'ezie na-eto eto) na-ekpughe ihe na-adọrọ mmasị tụnyere; kedu uru bara uru na nzaba akaụntụ gị ka ị ga-eme nke ọma na ụlọ ọrụ FX? Na-arụ ọrụ ahụ ugbu a, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọ na mmalite nke ọrụ ịzụ ahịa gị, ga-egosi na ọ bụ otu n'ime ngọngọ kachasị mkpa ị nwere ike ịme ka azụmahịa dị. Ọ ga - egbochi 'nrọ ụbọchị' banyere ihe ga - ekwe omume na ihe agaghị ekwe omume.
Ndị ahịa nọ na UK, Europe na USA agaghị enwe ike ịnwụ na akaụntụ $ 5,000 na-eweta ihe dịka pasent iri kwa ọnwa na-enye ego ọ bụla, nke bụ nzaghachi dị mma nke onye ọ bụla na-achọ ma enyi anyị Ijipt ga-ekele ya maka inweta dị otú ahụ. Ya mere, ndị ahịa 'dị n'ebe ọdịda anyanwụ' hà ga-eleba anya na ọkwa mbụ ha ma kpee ikpe maka ikike ha nwere ịghọ ahịa mgbe niile? "Ee" bụ azịza dị mkpirikpi ma anyị ga-akọwa ihe mere.
A na-ekwukarị na naanị otu ụzọ isi mee ka otu nde si na FX azụ ahịa bụ ịmalite na nde iri. Ime ka pasent iri laghachi na akaụntụ kwesịrị ịbụ onye ọ bụla ejidere. Ị nwere ike ịzụ ahịa naanị 0.1% nke akaụntụ nde iri iji nweta nlọghachi pasent iri kwa afọ. Site na uche zuru oke, nchịkwa ego na ụzọ, ịghaghachi otu nde na akaụntụ nde iri kwesịrị ịdị mfe dịka nlọghachị 1000 na-alọta na akaụntụ iri puku dollar. Ma nye ọtụtụ n'ime anyị eziokwu bụ na anyị agaghị echere nde dollar dollar na akaụntụ ahụ kwesịrị ịgbasa ọnọdụ gị ugbu a.
Ndị ahịa kwesịrị, na mbido ọrụ ha, dịka ha na-eme iwu ha na ihe ndị ọzọ na atụmatụ atụmatụ ahia ha, bụrụ ihe ezi uche dị na ha na-atụle ego ha nwere na ebe ọ bụ n'ezie na ọ ga-ewe ha. Ọ bụrụ na ị nwere $ 5,000 ugbu a, ọrụ gị ugbu a anaghị ahapụ gị na nchekwa dị iche iche iji chebaa ọkwa a ma ọ bụrụ na ị gaghị enweta ego ọ bụla site na ihe nketa site n'aka onye ikwu, mgbe ahụ enweghi nrọ na nrọ, ọ bụ oge iji bụrụ ihe ezi uche.
Nke a bụ ebe ihe ọjọọ na-ata ma nwee ike imerụ nganga na mmetụta nke ndị ahịa novice sụgharịrị site na nkwa nke akụnụba ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ anyị na-egwu. Ma inwe ezi uche banyere ihe ga-ekwe omume, o kwere omume ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya, bụ otu n'ime ihe mbụ mgbochi ndị ahịa ọhụrụ ga-emerịrị iji nwee ụdị ọganihu ọ bụla. Dịka onye ahịa Cairo na-egosi na ọ bụ mgbe niile ka ọ ga-enwe ike inwe ọganihu mmekọrịta. Ya mere ọ dị mkpa na ndị ahịa ọhụrụ na-etinye ọchịchọ ha n'ihe ndekọ ha, ma mgbe ha na-amalite ahịa na ka ha na-aga n'ihu.
" EC nwere ike ịchọpụta ego ahịa Germany, ebe ọnụahịa UK pụrụ ịdaba na 2.5% Mgbago nke Germany ruru afọ atọ ala, UK dara na 2.2%, dịka Asmussen si kwuo na ECB erubeghị ókè na "ihe ọ nwere ike ime" na onu ogugu ego ... »